Inkampani Yezokuxhumana Komphakathi | I-PR Agency & Marketing | Ubudlelwano Bomphakathi be-TOC
i-TOC ikhombisa i-podcast
Ihhovisi likaSaniffa County Saniff
Umphenduli Wokuqala Wempilo
Isiliva neWright LLP
Umnyango Wamaphoyisa eRialto
Umphathi uCurt Hagman
Sawubona, Siyi-TOC Ubudlelwano Bomphakathi
Sinikeza ubudlelwano bomphakathi, ukumaketha kwedijithali, kanye nezixazululo zokuxhumana ezinamasu nemiphumela efakazelwe.
Abakhi Bomkhiqizo Nabathengisi Bezindaba
Emphakathini wanamuhla, ukwakha ukwethembana komphakathi kanye nokugcina isithombe sobuchwepheshe kungenye yemisebenzi yakho ebaluleke kakhulu. Imiyalezo esesikhathini futhi esobala ayigcini nje ngokubalulekile ekwenzeni lokho kwenzeke, kepha sekuyilindelo. Ungavumeli abanye bakudalele isithunzi bakhulume indaba yakho.
Indlela yokudidiyela ngamabhulogi, izincwadi zezindaba, ukwakheka kwezithombe, kanye nezinsizakalo zezithombe / zevidiyo eziqeqeshiwe.
Thuthukisa isithombe esizwelana nabantu lapho bebona inhlangano yakho noma izimpawu zokukhomba zenkampani.
Iwebhusayithi enophawu oluyingqayizivele, enobuchwepheshe iyithuluzi elisebenzayo lokumaketha kanye nomnyango wamakhasimende angaba khona.
Uma ufuna i-templated, size-fit-all approach to your branding and marketing, lapho-ke asiwona umdlalo omuhle. Kwa-TOC Public Relations, siyaqonda ukuthi akuzona zonke izinhlangano ezifanayo, ngakho-ke isu lakho lokumaketha nalo ngeke libe njalo. Ithimba lethu laziwa ngokucindezela imingcele nokuphazamisa okujwayelekile. Uma lokhu kungakusabisi, vumela lokho TOC.
Iminyaka Yesipiliyoni Esihlanganisiwe
Indlela yethu Yesinyathelo Esine
Iklayenti ngalinye liyahlolwa futhi lihlolwe ukuze kuthuthukiswe isu eliqondene ngqo nezidingo zalo.
Ukwakha uhlelo oluchaza izinhloso ezithile kanye nesikhathi esibekiwe secebo lokumaketha ledijithali leklayenti.
Yilapho sisebenzisa khona isu lakho lokuxhumana nezentengiso yedijithali.
Sizobheka inqubekela phambili nemiphumela yesu lakho ukuqinisekisa ukuthi siyahlangabezana nezinhloso zethu.
Singumsebenzi ophelele wobudlelwano bomphakathi, ukumaketha kwedijithali, kanye nefemu yezokuxhumana enamasu. Sinokuhlangenwe nakho okungaphezulu kweminyaka eyikhulu okuhlangene nezici ezahlukahlukene zobudlelwano bomphakathi, ukweluleka amaklayenti ethu ngokususelwa kulwazi lokuzibonela nokuqonda. Sithola ulwazi olujulile ngezimboni zamakhasimende ethu futhi sisebenzisa indlela yokubamba izandla ukusebenzisa isu labo lokumaketha. Kufana nokuba neqembu lakho le-PR elingaphakathi nendlu.
Thola Ubudlelwano Bomphakathi Bamuva Kuka-TOC
Ingabe ubhalisele i-newsletter yethu? Siyathembisa ukuthi ngeke uzisole.
Okushiwo Amaklayenti Athu
U-Chief Mark Kling, uMnyango Wamaphoyisa waseRialto
Ukusebenzisana ne-TOC Public Relations ukushintsha ngokuphelele ukuxhumana kwethu nesithombe esiku-inthanethi bekumangalisa ngempela. Ngenxa yesizinda sokuphoqelela umthetho sikaTamrin, ukuqonda kahle esikudingayo ukufeza umsebenzi wethu.
Ummeli uTristan Pelayes, Amahhovisi Omthetho kaPelayes & Yu
Uma kukhulunywa ngobudlelwano bomphakathi, i-TOC PR isezandleni ezihamba phambili. Ukusuka kokukhishwa kwezindaba kuya ezinkundleni zokuxhumana nasezingqungqutheleni zabezindaba, bayazi ukuthi bangakuthola kanjani ukuvezwa okuhle.
U-Alex Weinberger, umnikazi webhizinisi
Ngiyathanda ukuthi ngingatshela i-TOC Public Relations umbono wami ngamabhizinisi ami futhi bazi kahle okufanele bakwenze ukuze bakwenze ngokungenaphutha. Banakekela ukumaketha nokufaka uphawu lwami lokushicilela ukuze ngikwazi ukugxila kumakhasimende ami.
Thola Isu Lakho Lokumaketha Lisendaweni
Sikulungele Ukukhonza Wena
Bona wonke amalungu eqembu
Hola uMdali Wokuqukethwe
Dala ubuwena obubonakalayo ngokubeka uphawu ngokulandela lezi zeluleko ezinhlanu
Ubudlelwano Bomphakathi be-TOC|Septhemba 11, 2021| Ukukhangisa Kwebhizinisi, Ukumaketha Okujwayelekile
Isu lomkhiqizo liyingxenye eyodwa ebaluleke kakhulu yokwakha nokugcina ibhizinisi eliphumelelayo. Kusuka ...
Lawa ngamahora nezinsuku zesonto ukugwema ukuthumela ku-Instagram
Ubudlelwano Bomphakathi be-TOC|Aug 31, 2021| Social Media Marketing
Ochwepheshe bezokuxhumana nabaphathi, lalela! Njengochwepheshe emkhakheni, sonke siyakuqonda ukubaluleka kwe ...
Izinzuzo ezinhlanu eziphezulu ze-LinkedIn zamabhizinisi, izinhlangano, nama-ejensi
Ubudlelwano Bomphakathi be-TOC|Jul 26, 2021| Marketing, Social Media Marketing
Kunemihlomulo eminingi iphrofayili ye-LinkedIn enganikeza ngayo ibhizinisi, enye yazo eqinisa ukuthembeka kwe ...
Bona zonke izindatshana
Izinzuzo Zokukhangisa Komkhakha Kahulumeni
I-Chino HIlls, CA 91709
Ukuphoqelelwa Komthetho Komphakathi
© 2021 TOC Ubudlelwano Bomphakathi. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Iwebhusayithi Inikwe Amandla Yi Ubudlelwano Bomphakathi be-TOC
ujoyine uhlu lwethu lwamakheli
Thola izindaba zakamuva nezibuyekezo zethimba lethu kubhokisi lakho lokungenayo!
Hlangana neqembu lethu
Ihhovisi likaSaniffa County Saniff
Umphenduli Wokuqala Wempilo
Isiliva neWright LLP
Umnyango Wamaphoyisa eRialto
Umphathi uCurt Hagman